Grid kirada – Red Sea Energy
Waa maxay shabakadda awoodda?
Shabakada korontada waxaadkuheleysaa awooda.
Ayaa iska leh shabakadda korontada?
Shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladuba waxay leeyihiin shabakadaha korontada. Waxaa Norway ka jira in ka badan 100 shirkadood oo shabakad ah.
Waa maxay kirada shabakadda korontadu?
Kirada griddu waa lacag kasta oo macmiil koronto kasta uu bixiyo si uu awood ugu helo koronto (koronto) shabakadda.
Maxaan ugu bixinaa kirada internetka?
Lacagta aad ku bixiso kirada shabakadda waxay ku socotaa ilaalinta shabakadda. Tusaale ahaan bedel kii hore. Haddii uu shil dhaco halka ay shabakadu ku burburto, qof waa inuu bixiyaa lacag si loo saxo. Taasi waa sababta aan u bixinno kirada shabakadda.
Miyay tahay inaan bixino kirada shabakadda?
Haa. Iyo sida sharciga Norway qabo, qof walba waa inuu bixiyaa kirada shabakadda. Halkan ka akhriso wax badan oo ku saabsan sharciyada: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301
Ayaa go’aaminaya qiimaha kirada shabakadda?
Waa milkiilayaasha shabakadaha laftooda ayaa go’aamiya qiimaha.
Qiimaha kirada shabakadu wuu ku kala duwanaan karaa goobta.
Mulkiile shabakadeed ayaa isku qiimo ku iibiya dhammaan isticmaaleyaasha shabakadda (adiga) aagga uu leeyahay milkiilaha shabakaddu.
Muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya milkiilaha shabakada iyo koronto siiyaha sida Red Sea Energy AS?
Red Sea Energy AS sinaba uma saameyn karto kirada shabakadda. Qiimaha kirada shabakadu waa mid ka madax banaan qiimaha korontada.